Nazi iYunivesithi yasePrinceton yasimahla ekhompyutheni onokuthi ufake isicelo kuyo nakweyiphi na indawo yehlabathi, kunye nezixhobo zonxibelelwano kunye neenkcukacha.
IYunivesithi yasePrinceton ibonelela ngezifundo zasimahla kwi-Intanethi kuye nawuphina umntu onomdla wokufaka isicelo sokuxubha izakhono esele zikho okanye ukufumana ulwazi olwahlukileyo kwimimandla eyahlukeneyo yokufunda, konke konke, ufumana ulwazi ngokukunceda kwaye simahla.
Inikwe enye yeeyunivesithi eziphambili kwihlabathi, iYunivesithi yasePrinceton yiyunivesithi yabucala yophando ye-Ivy League esePrinceton, eNew Jersey. Yayisungulwa kwi-1746 kwaye ukusukela ngoku ibonelela ngemfundo esemgangathweni kwaye yenze igalelo elininzi kwihlabathi kubandakanya ukuvelisa iialumni ezinje ngoJeff Bezos, uMichelle Obama, uJames Madison, njl.
Ngokwesiqhelo iiyunivesithi ze-Ivy League ezinje ngePrinceton kunye neYale kunzima ukungena kwaye zibiza kakhulu kodwa ukufuna kukaPrinceton ukusasaza ulwazi akupheleli kwigumbi lokufundela kunye nenani labafundi abakhoyo kodwa iziko elikhulu liqhubekile nokusasaza iimfundiso zabo ezisemgangathweni ngokusebenzisa ezona Izinto ezintsha ezithandwayo zedijithali-i-Intanethi.
Ngoku, kunye neelaptop, ikhompyuter okanye i-smartphone nawe unokuba yinxalenye yeYunivesithi yasePrinceton ngokufunda kwizifundo zasimahla ezikwi-Intanethi ezenzelwe wonke umntu kwihlabathi liphela ukuba athathe inxaxheba kwaye afumane ulwazi ngokuthe ngqo kwezona zandla zakhe zibalaseleyo.
Oku akunjalo kwiYunivesithi yasePrinceton kuphela, kukho nezinye iiyunivesithi zamanye amazwe ezibonelela ngezifundo zasimahla kwi-Intanethi.
Iyunivesithi yaseHavard ineqela lezifundo zasimahla kwi-Intanethi kuvulelekile ukufumana izicelo ezivela kubafundi bamanye amazwe kwihlabathi liphela kwaye ezi zifundo ziza nesatifikethi sokuzikhethela esivela eyunivesithi ekugqibeleni.
Ngendlela efanayo, kukwakho nezinye iikhosi zasimahla kwi-Intanethi zeYunivesithi yaseYale kubafundi bamanye amazwe banokuthatha nabo.
The IYunivesithi yaseToronto inezifundo zasimahla ezihlawulelwayo nezihlawulelwayo vula kwi-intanethi ufumana izicelo ezivela kubafundi kwihlabathi liphela.
Emva kophando olunzulu, ndakwazi ukuza neYunivesithi yase-17 ePrinceton yasimahla ekhompyutheni eqhubekayo ngoku kwaye ngonqakrazo lweqhosha onokufaka isicelo kulo khosi oyikhethileyo kwaye uqale ukufunda.
#1 Algorithms Icandelo loku-1
#2 Buddhism kunye nePsychology yanamhlanje
#3 Bitcoin kunye neCryptocurrency Technologies
#4 ITHEMBA: I-Odyssey yomntu ukuya kwi-Political Existentialism
#5 Algorithms Icandelo loku-2
#6 UbuGcisa boBunjineli boLwakhiwo: IiVaults
#7 Uyilo lweKhompyutha
#8 Utoliko loMgaqo-siseko
#9 iSoftware-Defined Networking
#10 iNzululwazi yeKhompyutha: iAlgorithms, ithiyori, kunye noomatshini
#11 INzululwazi yeKhompyutha: ukuCwangcisa ngeNjongo
#12 Izifundo zeeMyelo zoBhalo: iNzululwazi yonikezelo
#13 Inkululeko yoluntu
#14 Uhlalutyo lwe-algorithms
#15 Uhlalutyo lwe-Combinatorics
#16 Uthungelwano Luzotyiweyo: Imigaqo ngaphandle kweKhalculus
#17 IAltruism esebenzayo
Ukuqukunjelwa kwezi zifundo zisimahla kwi-17 zeYunivesithi yasePrinceton
Iialgorithms Icandelo 1
UbuBhuda kunye neNzululwazi yezeNgqondo
ITHEMBA: I-Odyssey yoLuntu kwiPolitiki ekhoyo
Iialgorithms Icandelo 2
Ubugcisa bobuNjineli boKwakha: Iivenkile
Inzululwazi yeKhompyuter: iiAlgorithms, Theory, kunye neMachines
Ubunzululwazi bekhompyutha: Inkqubo noNjongo
UkuBhala ngeMeko yoFundo: Inzululwazi yokuHanjiswa
Inethiwekhi Imizobo: Imigaqo ngaphandle kwe-Calculator
#1 Iialgorithms Icandelo 1
Ii-algorithms kunye nolwakhiwo lweedatha zibalulekile kwinkqubo kwaye yiyo le nto isifundo sePrinceton sasimahla kwi-Intanethi sifundisa njengoko sabelana ngolwazi olubalulekileyo kulwakhiwo lwedatha esisiseko, ulwakhiwo kunye nokuphanda ii-algorithms kubandakanya usetyenziso kunye nohlalutyo lwenzululwazi lokumiliselwa kweJava.
Abafundi baya kufumana izakhono kulwakhiwo lwedatha, ialgorithm kunye neprogram yeJava.
Phantse iiyure ezi-53 zokugqiba
#2 UbuBhuda kunye neNzululwazi yezeNgqondo
AmaBuddha ayaziwa ngokucamngca kwabo kwaye banezimvo ezizodwa malunga nengqondo yomntu, le khosi yasimahla ekwi-Intanethi iphonononga iimfundiso zobuBuddha kubandakanya ezi zimvo kunye nendlela ukucamngca okuwunceda ngayo umzimba womntu kunye nokuphendula imibuzo ngendlela ubuBuddha obudibene ngayo nesayikholoji yanamhlanje
Abafundi baya kufumana ulwazi nezakhono kwifilosofi, kwisayikholoji, ukucamngca nasekucingeni.
Phantse iiyure ezili-18 zokugqiba.
#3 Bitcoin and Cryptocurrency Technologies
I-Bitcoin uhlobo lwemali yedijithali eyenziweyo kwi-2008 kwaye sele ifumene udumo kwaye ngokuthe ngcembe ibetha iimali zesiko kwaye kuthiwa ikamva lokuhlawula.
Kule khosi yasimahla kwiYunivesithi yasePrinceton funda yonke into malunga neBitcoin kunye netekhnoloji esemva kwayo, yintoni eyenza ukuba ikhetheke kangaka, yahluke?
Phantse iiyure ezili-23 zokugqiba.
#4 ITHEMBA: I-Odyssey yoLuntu kwiPolitiki ekhoyo
Buyintoni ubuntu? Ndiphila njani kubuntu bam? Le mibuzo kunye nokunye bekuhlala kusokolisa iingqondo zabaninzi, ngoku nali ithuba lakho lokufumana iimpendulo zale mibuzo kwaye ufumane ukuphonononga ezinye iinkalo zobukho bomntu njengobomi, inkululeko, ukufa, inkululeko, kunye nokufuna ukonwaba nentsingiselo .
Umzamo: 3-5 iiyure ngeveki.
#5 Iialgorithms Icandelo 2
Sukuma kwiAlgorithm 1, qhubeka nokuzama ukufunda kwaye ufumane okungakumbi malunga nealgorithms kuya kukunceda ukuba ube ngumdwelisi ongcono.
Phantse iiyure ezili-58 zokugqiba.
#6 Ubugcisa bobuNjineli boKwakha: Iivenkile
Ukufumana ulwazi olusisiseko lobunjineli boluntu kule khosi, funda malunga noyilo lwezinto zakudala kunye nezangoku kwaye ufumane ubugcisa bobunjineli bobume.
Umzamo: iiyure ezingama-2-3 ngeveki
#7 I-Computer Architecture
Ukufumana ulwazi kunye nezakhono zokwenza uyilo lweekhompyuter lweemicroprocessors zangoku.
Phantse iiyure ezili-50 zokugqiba.
#8 Ukutolikwa koMgaqo-siseko
Umgaqo-siseko waseMelika uyinxalenye yento eyenza i-United States yaphumelela kodwa abanye abantu abavumelani ngendlela otolikwa ngayo umgaqo-siseko, le khosi yase-Princeton yasimahla ekhompyutheni iphonononga umgaqo-siseko kwaye iphendula eyona mibuzo ibalulekileyo kutoliko lomgaqo-siseko waseMelika.
Umzamo: iiyure ezingama-2-5 ngeveki
#9 I-Software-Defined Networking
Usoloko unomdla malunga nendlela esebenza ngayo i-WiFi? Ewe, nali ithuba lakho lokugcwalisa olo lwazi kwaye ufunde yonke into malunga nenethiwekhi echaziweyo yesoftware kunye nendlela etshintsha ngayo iindlela zonxibelelwano zigcinwa, zilawulwa kwaye zikhuselekile.
#10 Inzululwazi yeKhompyuter: iiAlgorithms, Theory, kunye neMachines
Le khosi ithathela abafundi nzulu kwisayensi yekhompyuter apho bafunda ngakumbi kwi-algorithms, ithiyori kunye noomatshini kunye nokusetyenziswa kwayo kwinkqubo, kubalo kunye nakwiikhompyuter zangempela.
Phantse iiyure ezi-16 zokugqiba
#11 Ubunzululwazi bekhompyutha: Inkqubo noNjongo
Funda iziseko zesayensi yekhompyuter kule khosi, izinto ezibalulekileyo zenkqubo kunye nokusetyenziswa kwayo kwezinye iinkalo zokufunda.
Phantse iiyure ezi-88 zokugqiba
#12 UkuBhala ngeMeko yoFundo: Inzululwazi yokuHanjiswa
Le khosi yase-Princeton yasimahla ekhompyutheni ikufundisa okuninzi ngokubhala kuya kunceda ukuphucula unxibelelwano lwakho, uya kufunda ukwenza isicwangciso sophando, indlela yokucwangcisa kunye nokwenza udliwanondlebe kunye nesayensi yokuhanjiswa - apho uya kuqonda khona ukuba iingcali ziziphumeza njani iingxaki imigaqo-nkqubo okanye iinkqubo.
Umzamo: iiyure ezingama-3-5 ngeveki
#13 Libutho Loluntu
Qala uhambo lwakho lomthetho ngale khosi yasimahla kwi-Intanethi ngokukhangela indlela yokuziphatha kwamabango aphikisayo ngamalungelo oluntu kunye nenkululeko kwaye ufunde indlela yokuhlalutya amabango.
Ngena nzulu kwihlabathi lee-algorithms, funda uqikelelo lobungakanani bezinto ezinkulu zokudibanisa usebenzisa i-calculus kunye nokusetyenziswa kwayo kwii-algorithms. Le khosi yasimahla ikunika ubunzulu, ukuqonda okungcono kwealgorithm kwaye emva koko, uba yinkqubo engcono.
Phantse iiyure ezi-15 zokugqiba
Fumana izandla zakho kule khosi yasimahla yaseYunivesithi yasePrinceton kwaye ufunde indlela yokomfuziselo yokufumana ubudlelwane obusebenzayo phakathi kwemisebenzi yesiqhelo, yokucacisa kunye nokwenza imisebenzi eyahlukeneyo kunye neendlela kuhlalutyo oluntsonkothileyo.
Phantse iiyure ezi-13 zokugqiba
#16 Inethiwekhi Imizobo: Imigaqo ngaphandle kwe-Calculator
Le khosi yasimahla yazisa abafundi kwizinto ezisisiseko ezisemva kothungelwano lwentlalo kunye nezobuchwephesha eziyinxalenye yobomi bethu bemihla ngemihla kwaye zifundisa ulawulo lwamandla kunxibelelwano lweselula phakathi kwabanye. Uyakufumana ngokulinganayo ukuqonda kwendlela iGoogle eyalela ngayo iziphumo zokukhangela kunye nokwenza i-WiFi ikhawuleze kwenye indawo kwaye icothe kwezinye.
Phantse iiyure ezi-24 zokugqiba
#17 U-Altruism osebenzayo
Le khosi yase-Princeton yasimahla ekhompyutheni iphonononga iingcinga ezinamandla, ezibalulekileyo ezixhaswa luphando ngendlela yokuphila ubomi bokuziphatha ngokupheleleyo ngokulinganayo uphendula imibuzo malunga nokuba kuthetha ukuthini ukuba ngumntu olungileyo nokuba unganguye njani.
Ezi iYunivesithi yase-17 yasePrinceton yasimahla ekhompyutheni, beka izandla zakho kwezi khosi ngaphandle kokuhlawula ideni kwaye khumbula ukuba ungafunda kangangoko unako.
Isifundo esikwi-Intanethi sikunika ithuba lokufunda ngokulula kwakho, unokuqeshwa, umfundi, umnini weshishini okanye umntu osebenza yedwa ehambelana neshedyuli yakho njengoko iikhosi zizenzela nto oko kuthetha ukuba uza kufunda xa ufuna, ngokungafaniyo isikolo esiqhelekileyo.
Hlamba izakhono zakho esele zikho okanye ufumane ezitsha ngayo nayiphi na iYunivesithi yasePrinceton yasimahla kwizifundo ezikwi-Intanethi kwaye unokongeza izifundo ezigqityiweyo kwiCV / Resume yakho iya kukunceda kukhangelo lwakho ngokukubeka phambili kukhuphiswano lwabasebenzi .
Iikhosi zasimahla zePrinceton kwi-IntanethiIYunivesithi yasePrinceton iikhosi zasimahla kwi-Intanethi
Post Previous:Iindlela ezi-5 eziMangalisayo zokufumana i-PhD e-Australia ngeScholarship
Okulandelayo Post:Izifundo zasimahla ze-10 ze-Hairstyling ezikwi-Intanethi ezifikeleleka ngokulula
Antonis Papadopoulos uthi:
February 23, 2022 kwi 11: 04 pm